Vaovao mahafinaritra! Tsy misy mahalala hoe iza ianao! | Martech Zone
Talata, Desambra 18, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Patronpath mitombo! Noho ny asa tsy mampino nataon'ny mpiasan'ny Sales Support anay, ny Sales ary indrindra ny CEO - Patronpath dia miroso. Rehefa mieritreritra ny lozisialy ho serivisy aho dia tsy misy ohatra lehibe noho ny baikon'ny Internet amin'ny indostrian'ny serivisy sakafo.
I natomboka tamin'i Patronpath tamin'ny volana aogositra tamin'ity taona ity. Sarotra ny asa. Ny ekipan'ny fampandrosoana dia tsy maintsy nandresy asa sarotra sasany nefa nanohy nanatitra. Ary koa, misy ny olana amin'ny manova paradigma sasantsasany amin'ny sehatry ny trano fisakafoanana.
Mandefa fampidirana miaraka amin'ireo mpivarotra POS marobe miaraka amin'ny rafitra POS izay natsangana tamin'ny taon-dasa. Nahavita fampidirana Enterprise Call Center izahay. Amin'ity herinandro ity dia manandrana ny User Interface vaovao izahay izay ho mpanakalo lalao amin'ny indostria. Tsy miadana isika fa mihazakazaka! Manakarama ny mpitantana kaonty voalohany izahay.
Manana mpiara-miasa miasa ara-bakiteny aminay izahay ary manompo mpanjifa manerana ny firenena sy manerantany. Mba hanarahana ny tetikasanay, dia ampiasainay ny Basecamp (Eny, IZAY Basecamp) ary Google Apps ho an'ny orinasa kely.
Na dia mampiasa Outlook ao anaty ho an'ny mailaka aza izahay dia nanomboka kalandrie nozaraina hanara-maso ny fampiharana ny mpanjifanay. Mampiasa izahay Google Docs hizara sy hiara-miasa amin'ny antontan-taratasy sy takelaka. Mahatratra lavitra noho izany ny tombony azo noho ny fandefasana takelaka amin'ny alàlan'ny mailaka ary ezahina hitazona izany rehetra izany.
Google docs dia fitambaran'ny wiki sy Microsoft Office iray ao anaty iray. Azonao atao ny manendry olona avy ao anatin'ny fonenanao na ivelan'ny fonenanao miaraka amin'ny haavon'ny fidirana sy ny fiaraha-miasa. Manana orinasa 10 tsy latsaky ny XNUMX manana fidirana amina antontan-taratasy isan-karazany izahay - miaraka amina lalana fanaraha-maso sy tantara amin'ny tsirairay avy. Izy io dia loharanom-pahalalana tsy mampino izay tiako hatao amin'ny orinasa habe. Azonao atao koa ny manao chat an-tsoratra amin'ny takelakao!
Efa nandre momba ny Google Apps ve ianao?
Ka… vaovao vaovao mahaliana izany androany NPD dia nanambara fa 73% ny olona tsy mahalala akory hoe Google Docs nisy. Ny 94% aza tsy mahalala akory fa misy ny suite famokarana tranonkala eto. Ny olona sasany ao amin'ny indostrian'ny birao tototry ny fientanam-po - ny sasany niantso azy hoe ny fahafatesan'ny Web App.
Ho an'ireo an'ny us ao anatin'ny ny Software toy ny Service orinasa, ireo antontan'isa ireo dia mametraka tsiky eo amin'ny tarehintsika. Angamba mitsiky be mihitsy aza. Tsy misy mahalala fa eto isika - kanefa dia mihalehibe. Tsy vitan'ny hoe mitombo fotsiny isika fa manapoaka.
Andeha hojerentsika amin'ny fomba hafa io.
73% ve no nilaza fa nahalala momba ny Google Documents nefa tsy nampiasa azy io? Tsia.
94% ve no nilaza fa nahafantatra momba ny rindranasa famokarana an-tserasera saingy tsy nampiasa izany? Tsia.
Nilaza izy ireo fa mbola tsy naheno an'izany. Ry zazalahy!
Raha tsy mieritreritra ianao fa io dia antso avo ho an'ny marketing ary fotoana tsy mampino amin'ny fitomboana… mety miasa ao amin'ny orinasan-rindrambaiko birao ianao. Tsy ny fahafatesana fa ny fahaterahana!
Ny fitoviana misy eo amin'ny lozisialy Office Productivity sy rindrambaiko hafa amin'ny maha fampiharana fampiharana azy dia eo. Tsy misy mahalala fa eo amin'ny habakabaka koa isika. Ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana sy rojo dia mino fa mila manangana ny rafitr'izy ireo manokana na miankina amin'ny mpivarotra POS azy ireo. Vonona ny hiloka aho fa ny 99% amin'ny indostrianay dia tsy mahalala fa eo akaiky isika.
Izahay dia miankina amin'izany!
Tags: Orsa mahira-tsainafamintinanahevitra momba ny votoatycopybloggerdrupalimavexJason CohenJoomlaFanamafisana ny varotraSlider
Lahatsary: ​​Blogs amin'ny Plain English
Dec 18, 2007 ao amin'ny 11: PM PM
Nanaiky. Heveriko fa hafahafa ny fampiasan'ny olona ny fanadihadiana momba ny fahafatesan'ny Office 2.0. Ary tadidio fa tsy milaza na inona na inona momba ny isan'ny olona ny fanadihadiana dia mampiasa ny serivisy, na izy ireo tokony.
Heveriko fa tsy misy mampihomehy ny hoe ny tranonkala iray antsoina hoe "Microsoft Watch" dia manana zoro farany sy fahitana manjombona amin'ity fanadihadiana ity. Mampihomehy loatra… efa nandre momba ny Live Office ve izy ireo?
Dec 19, 2007 amin'ny 2: 38 AM
Tsy mbola naheno momba an'i Patronpath ary rehefa avy namangy ilay rohy aho dia mbola tsy nahazo izay nataony.
Dec 19, 2007 amin'ny 8: 24 AM
Eny, mahatsiravina tokoa ny tranokalanay! (Vita talohako io) vita ny fanavaozana ny tranokala ary eo an-dàlam-pandrosoana izao… efa tapa-bolana no nanaovanay azy!
Dec 20, 2007 amin'ny 2: 21 AM
Toa mampahery tokoa! Ary midika izany fa mila miasa mafy kokoa isika Wrike.com fampiroboroboana amin'ny taona ho avy 🙂 Misaotra tamin'ny lahatsoratra!